डेभिड इके लन्डन रियल सेन्सर गरिएको भिडियो: आईके वास्तविक वा नक्कलीका लागि हो वा सत्य बूबी जालको साथ मिसिएको छ? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	8 अप्रिल 2020 मा	• 33 टिप्पणिहरु
हालैका दिनहरूमा म डेभिड आईके र उनको लन्डन रियल अन्तर्वार्ताको बारेमा प्रश्नहरूले डुबाएको छ किनभने बीबीसीले युट्यूबलाई उक्त अन्तर्वार्ता हटाउन आग्रह गरेको थियो, जुन युट्युबले यो गर्‍यो। भनिन्छ कि घण्टा भित्र भिडियो लाखौं दर्शकहरु को लागी आकर्षित, तर दूर सेन्सर गरीएको थियो। किनकि डेभिड आईके विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात आलोचक चिन्तक हो, म उनी जे भन्छु ठीक हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरुमा डुबिएको छ। यसैले मैले यसमा लेख समर्पित गर्ने निर्णय गरें।
मेरो उत्तर स्पष्ट छ: डेभिड आइके आफूले भनेका सबै कुरामा पूर्णतया ठीक छन्, तर जहाज डुब्नका लागि त्यहाँ दुईवटा तल्लो भित्र बम रहेको हुन सक्छ।
म यसलाई ध्यान दिएर तल वर्णन गर्छु। तर यदि तपाइँ आफ्नै राय बनाउनु हुन्छ भने, म मात्र यस विषयमा मेरो दृष्टिकोण दिनेछु।
Iaker, होशपूर्वक, डबल तल्लो मा एक बम राखिएको छ कि, मँ भन्न साहस। जे भए पनि, ऊ यति प्रामाणिक र मान्छे ब्यूँझन जोसिला देखिन्छ। यद्यपि हामी पनि एलेक्स जोन्स वा रोबर्ट जेन्सेन जस्ता मान्छेहरूसँग उस्तै उत्कटता देख्छौं, केवल डेभिड आईकेसँग यो धेरै प्रामाणिक देखिन्छ। अभिनय कार्यको कुनै पत्ता छैन।
मैले विगतमा सेफ्टी नेट प्यादका बारेमा कुरा गरें। प्यादाको विशेषता यो हो कि त्यहाँ कोही छन् जसले उसलाई वा उनलाई नियन्त्रण गर्छ। यो बेहोश तहमा पनि गर्न सकिन्छ। किनकि म years बर्ष भन्दा बढि लेख्दै छु, मैले पत्ता लगाए कि तपाईंलाई धेरै जानकारीहरू खुवाइएको छ र त्यो सूचना पाठ्यपुस्तकहरू वा (तपाईंको आफ्नै शब्दहरूमा) वफादार अनुयायीहरूले पठाएको हो। तपाईं कहिलेकाँही व्यक्तिबाट चीजहरू पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ जसले भन्छन कि उनीहरू विश्वविद्यालयका शिक्षितहरू हुन्; डाक्टर, प्रोफेसर वा प्राध्यापक। जब मलाई यो हुन्छ, म सधैं मेरो शुरुआती दिनहरूमा फर्केर सोच्छु जब मैले एनास ओराग केसमा पुलिसबाट एक आधिकारिक कागजात पाएँ। यो कागजात जानाजानी पासोमा परिणत भयो: गलत।
संक्षेपमा: यो खेलको वर्तमान समयलाई जान्न धेरै गाह्रो छ कि प्रामाणिक स्रोतबाट आएको जानकारी एकै बल क्षेत्रले चलाएको छैन कि साजिश रच्दछ।
सुरक्षा नेट प्यादाहरू लाई धेरै सत्यको घोषणा गर्न र धेरै अनुयायीहरू प्राप्त गर्न अनुमति छ। यसका लागि उनीहरू दुबै मिडिया (नकारात्मक) र वैकल्पिक मिडिया (सकारात्मक) बाट बोल्ने धेरै समय र ध्यान प्राप्त गर्दछन्, किनकि तपाईले ध्यान दिने कुरा बढ्छ। हामीले देख्यौं कि कसरी ऐस बेकरले media 911 ११ पछि धेरै मिडिया एक्सपोजर प्राप्त गरेर 'सत्य आन्दोलन' लाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्‍यो, जस पछि उनले एक प्रत्यक्ष रेडियो कार्यक्रममा आफ्नै जीवन लिए; मात्र पछि फेरि जीवित हुनको लागि (यहाँ सुन).
लुसिफेरियन 666 XNUMX हात इशारा पामेला डेभिड आईके संग, स्रोत: whale.to
डेभिड आईके एक प्रशिक्षित टिभी व्यक्तित्व हुन् जसले राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए। उसको दोस्रो विवाह पामेला लेग रिचर्ड्ससँग भयो। अब तपाई कुनै व्यक्तिलाई उसको भूतपूर्वको साथ संगठित गर्न सक्नुहुन्न किनकि हरेक मानिस आफ्नै तरिकाले जान्छ र कहिलेकाहिँ तपाई कसैलाई गम्भीर गल्ती हुन सक्छ वा पूरै विपरित दृष्टिकोण हुन सक्छ, तर पामेला स्पष्ट रुपमा एक पहलवाले काबालिस्ट हुन् जसले स्पष्ट रुपमा लुसिफेरियन प्रतीकात्मकता प्रदर्शन गर्दछ। उनको वेबसाइट खडा छ।
आईके आफैंले धेरै पुस्तकहरुमा स indicates्केत गर्दछ कि उनले 'उच्च शक्तिहरू' सुन्दछन् र यिनै शक्तिहरू छन् जुन उनलाई उनको पूर्व पत्नी पामेला (एलिस्टर क्रोली, एलिस बेली मार्फत) सँग जोड्न जारी राख्दछन्। यस तथ्यको बावजूद कि इकेले क्रोली र बैली वरिपरि अन्धकारको पर्दाफास गर्दछ। यहाँ आइके सम्बन्धी उल्लेखनीय मुद्दाहरूको सूची छ:
एलिस बेली (युएन लुसिफेरियन 'सद्भावना' एजेन्डाका संस्थापक) सँग उनको सम्बन्ध
बेलीको विशिष्ट "चढाएको मास्टर्स" को उनको च्यानलहरु र ती उनीहरुको जीवन मार्गनिर्देशनहरू हुन् भनेर उल्लेख छ।
उनको चन्द्र सिद्धान्त एलिस बेलीबाट आउँदछ
नयाँ विश्व क्रम अन्तर्गत स्थापित नयाँ लुसिफेरियन धर्म कब्बालाहको शिक्षाको विशेषता भनेको जनता ब्यूँझनु पर्छ। हामी संसारमा खराबी र भलाइको लागि ठूलो स्तरमा उठ्नु आवश्यक छ (हेर्नुहोस्) व्याख्या)। यही कारणले गर्दा पेडोफिलिया अचानक स्पटलाइट अन्तर्गत यस्तो छ, उदाहरणका लागि। संसारमा सबै खराबी सतह पर्छ। त्यो डेभिडको काम देखिन्छ। यो लुसिफेरियाको एकवचनता (जसलाई "ज्ञानको बाटो" पनि भनिन्छ) तर्फ द्विपक्षीयताको मार्ग हो। हामी यो द्वन्द्ववादलाई प्रमुख विश्व धर्महरू, राजनीतिमा, धर्महरूमा (ईश्वर बनाम शैतान) र मिडिया बनाम वैकल्पिक मिडियामा स्वीकार गर्दछौं।
डेभिड आईकेले खराबीलाई उजागर गर्ने भूमिका पूरा गर्दछ। यो कबालिस्टिक लक्ष्य तिरको एक तरिका हो। त्यो अन्तिम लक्ष्य हामी एक अनुकरणात्मक वास्तविकतामा बाँचिरहेका छौं भन्ने विचारको लागि हाम्रो चेतनाको उद्घाटन मार्फत प्राप्त हुन्छ। त्यसोभए इकेन आफैले एलोन मस्कलाई उनको दोहोरो एजेन्डाको बारेमा दिन्छन् (एआईको बारेमा चेतावनी दिन्छन्, जबकि कस्तूरी मस्तिष्कलाई क्लाउडमा झुण्ड्याउन चाहन्छ र आकाशमा G जी उपग्रहहरू थाँहा दिन चाहन्छ), यो पनि आफ्नै लागि देखिन्छ। किनकि यदि तपाईं केवल यो मात्र उल्लेख गर्नुहुन्छ कि हामी एक अनुकरणात्मक वास्तविकतामा बाँचिरहेका छौं र तपाईं लुसिफेरिया भाइरस सिमुलेशन छ भनेर वर्णन गर्नुहुन्न भने, तपाईं मानिसहरूलाई झूटा एकलताका साथ परिचय गराइरहनु भएको छ र तपाईंले मानिसहरूलाई लुसिफेरियन एआई (जुन कुन फ्यूजनमा परिचय गराउँदै हुनुहुन्छ)। म यो मेरो पुस्तकमा वर्णन गर्दछु)।
त्यसोभए म भन्न सक्दिन कि आइके एक सचेत वा “नियन्त्रित” सुरक्षा नेट प्यादा हो, तर मलाई लाग्छ कि हामी कोरोना भाइरसलाई G जी मास्टमा जडान गर्नमा छलिएका छौं। कसले ती G जी मास्टहरूलाई आगो लगाईरहेको छ भन्ने सवालमा बाहेक र यिनीहरू केवल स्टेट एजेन्टहरू हुन् कि छैनन् भन्ने कुनै ठोस प्रमाण छैन कि G जीले वास्तवमा फोक्सोमा अक्सिजन बढाउन रोक्छ, न त कडा प्रमाण छ कि G जीले कोशिकाबाट एक्जोमको उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्छ। । इकेका अनुसार यी एक्सोजोमहरूमा कोरोनाभाइरस जत्तिकै शरीर रचना हुन्छ। यो हुन सक्छ, तर मलाई लाग्छ कि यो बिल्ट-इन बम डबल तल्लोमा छ।
त्यहाँ ती danger जी मास्टमा कुनै खतरा छैन? हो, म यसलाई व्याख्या गर्छु यो लेख। एक PsyOp एक PsyOp 'घोटाला' पनि हुन सक्दछ (झूटा?) 5G (अक्सिजन अपटेक ब्लक वा exosomes) को साथ लिंकको बिना।
पहिले मैले भनें कसरी ब्रान्ड 'दायाँ' वैकल्पिक मिडियामा प्रमुख अनुहारहरूमा षडयन्त्र सिद्धान्तहरूलाई जोडीएर निर्माण गरिन्छ। एलेक्स जोन्स, रोबर्ट जेन्सेन, डेभिड आइके जस्ता व्यक्ति र धेरै वेबसाइटहरू डोनाल्ड ट्रम्प, बोरिस जोनसेन, जैयर बोल्सनारो, थियरी बाउडेट र अन्य दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञसँग लिंक छन्। आवश्यक बिल्ट-इन डिसइनफोको साथ, सत्यको साथ मिश्रित र अस्थायी सहित ब्रान्ड 'दायाँ' को निर्माणको साथ। शक्ति को उदय ती दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरूको, तपाईं चाँडै नै एक पटकमा त्यो ब्रान्ड उडाउन र त्यसपछि बच्चालाई नुहाउने पानीको साथ बाहिर फाल्न सक्षम हुनुहुनेछ।
त्यसोभए तपाईं पुरानो राजनीतिक प्रतिष्ठान र मुख्यधारा मिडियाको सबै आलोचनाहरू एक पटकमा फर्काउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं यस समूहलाई दोषीको रूपमा तोक्न सक्नुहुनेछ। एक स्पष्ट रणनीति देखिन्छ कि कोरोनाभाइरस चाँडै मिडिया र राजनीति मार्फत बेच्ने छ "अधिकार" द्वारा कम आविष्कार गरिएको कुराको रूपमा र अर्को सम्भाव्यता यो हो जसमा तपाईले अंतर्निहित डिसिनफोलाई कमजोर पार्ने प्रमाणहरू प्रदान गर्दछन्।
त्यसकारण जब डेभिडले धेरै सत्य कुरा गर्दैछन, मलाई लाग्छ त्यो रणनीतिको एक हिस्सा हो। मेरो विचारमा, Ikes लगभग पूर्ण कडा सत्य बोल्छ। म उसको कुराको 99 what% सँग पूर्ण सहमत छु। उसले खराबी प्रकट गर्दछ र जागरूकतालाई औंल्याउँछ। जे होस्, त्यहाँ डबल तल्लो मा एक बम छ।
म उनको कथामा के सम्झन्छु त्यो लुसिफेरियन भाइरस प्रणालीको लागि चेतावनी हो। वास्तवमा यदि हामी यसको सार बुझ्छौं भने हामी यस लुसिफेरियाको भाइरस प्रणालीमा रहिरहदैनौं र पत्ता लगाउँदैनौं कि हामी आफैले मौलिक ब्रह्माण्डका निर्माताहरू हौं, जुन वर्तमान ब्रह्माण्ड मात्र एउटा लंगडा हो। हामी आफैंमा भाइरस प्रणालीमा छौं; एक भाइरस प्रणाली जुन केवल मूल ब्रह्माण्डको एक सीमान्त प्रतिलिपि हो। म यसलाई मेरो पुस्तक र यसमा विस्तृत र विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दछु थप लेखहरू। आफ्नै लागि न्यायाधीश।
(भिडियो हटाइयो? यहाँ हेर्नुहोस्: bitchute.com)
डेभिड इके लन्डन रियल April अप्रिल २०२० (पूर्ण) बाट Jmedia on Vimeo.
बन लिङ्क सूचीहरू: flywithmeproductions.com
ट्याग: प्रतिबन्धित, साजिश सिद्धान्त, दाऊदले, exosomes, विशेष, फिलिम, अवरुद्ध, सेन्सर, कुराकानी, आईके, साक्षात्कार, लन्डन, psyop, वास्तविक, घोटाला, tv, हटाइयो, हटाइयो, भिडियो, YouTube
8 अप्रिल 2020 मा 11: 32
जो वर्षौं देखि यस Alt मा हिंडिरहेका छन्। सर्किट (२ 25 बर्ष वा सो भन्दा बढी) लाई थाहा छ कि आइकेलाई विश्वास गर्नु हुँदैन र उनी बीबीसी (ट्याविस्टक) प्रोग्रामि factory कारखानाबाट आएका छन्। युस्टेस मुलिन्ससँग धेरै डारिल ब्रैडफोर्ड स्मिथ अन्तर्वार्ताले इकेलाई पर्दाफास गरेको छ। लगभग सबै डेरिल ब्रैडफोर्ड स्मिथको अन्तर्वार्ता वाईटीबाट हटाइएको छ, र इकेले साब्बतियन फ्रान्कवादी सिद्धान्त पनि प्रयोग गर्दछ जुन स्मिथको च्यानलमा व्यापक रूपमा छलफल गरिएको थियो।
आईकेले प्रयोग गर्ने जानकारी अन्य प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्ताहरुबाट आउँदछन् जसलाई ऊ कहिले होइन, तर कहिले पनि नामले सेफ्टी नेट अपरेशन भन्दैन। आइके जोन्ससँग तुलना गर्न सकिन्छ जब यो टाउकोको कुरा आउँदछ, तिनीहरू बित्तिकै खस्दछन्, विशेष गरी बीबीसीमा।
8 अप्रिल 2020 मा 12: 02
यस अन्तर्वार्तामा, उनले बीबीसीलाई एक पटक रिपोर्टिंगको बारेमा एक पटक आक्रमण गरेन, उदाहरणका लागि, / / ​​११ को अपरेशनको क्रममा building निर्माण। र सर सोच्दछन् कि बेलायती शाही परिवार आकार शिफ्टर हुन्, हास्यास्पद!
8 अप्रिल 2020 मा 12: 33
त्यहाँ एउटा चीज छ जुन नियन्त्रित विपक्षी प्यादहरूले कहिले त्यस्तो कुरा गर्दैनन्: 'नियन्त्रित विपक्ष' को अवधारणाको बारेमा।
तपाईंले तिनीहरूलाई कहिले पनि सुन्नुहुन्न कि त्यहाँ Inoffizieller Mitarbeiter (IMB का सदस्यहरू… जिसे NSB सदस्यहरू भनेर चिनिन्थ्यो) को सम्पूर्ण सोशल मिडिया सेना छ। एउटा फौज जसमा आधा मुख्यधाराको कथा र अन्य आधाले नियन्त्रणित प्यादा र कथाहरूको रक्षा गर्छ।
8 अप्रिल 2020 मा 12: 43
ठ्याक्कै, यहाँ पनि यस साइटमा म नयाँ ट्रोलहरू देखा पर्दछु। सचेत रणनीति तिनीहरूलाई माध्यम दिनुहोस्?
8 अप्रिल 2020 मा 12: 45
हो, कहिलेकाँही तपाईले यो देखाउनु पर्छ
8 अप्रिल 2020 मा 16: 31
यथा पूर्वानुमान रूपमा यो, केक अब सेन्सरशिपको लागि कार्यरत छ किनकि जोनहरू युट्यूबमा व्यापक सेन्सरशिपको लागि प्रयोग गरिएको छ।
कोरोनाभाइरस: डेभिड आईके G जी साक्षात्कार पछि YouTube नियम कडा बनाउँछ
10 अप्रिल 2020 मा 09: 03
Opposition 99,9. opposition% वैकल्पिक विपक्षमा जस्तै, आइकेलाई पनि जाँचिएको छ, किनकि मित्र जेन्सेनले आफ्नो अन्तिम पोडकास्टमा आईके भिडियोमा आफ्ना अनुयायीहरू र श्रोताहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन् र यसलाई आफ्नो वेबसाइटमा पोष्ट गरेका छन् (पोडकास्ट ० -09 -०04-२०२० जेन्सेन) )
10 अप्रिल 2020 मा 09: 09
तपाईलाई यो हेर्न मनपर्दैन। धेरै मानिसहरूले विगत .7,5..XNUMX बर्षमा मेरो साइटमा इकेलाई देखाएका छन्। तिनीहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा रिपोर्ट गरे। र त्यो मैले नियन्त्रणमा राखेको विपक्षी हो भनेर महसुस गर्नु अघि थियो। वास्तवमा ... मसँग अझै यो उच्च थियो।
इकेले जहिले पनि मलाई बेवास्ता गरेको छ, जबकि मसँग उदाहरणका लागि Ninefornews भन्दा धेरै अनुयायीहरू छन्। र अझैपनि उसले सँधै ती वेबसाइटहरूलाई हेर्छ र उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन्छ, जुन तपाईलाई सँधै नियन्त्रणको रूपमा थाहा छ। छोटकरीमा: तिनीहरू धोखा दिन चाहँदैनन्।
10 अप्रिल 2020 मा 09: 28
आईकेको भिडियो यूट्युबबाट फ्याँकिएको हो भन्ने तथ्यलाई (र त्यो तथ्यलाई धेरै प्रचार गरिएको छ) केवल ईकेलाई अझ भरपर्दो देखाउनको लागि र अझ बढि व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्नु हो जुन उहाँ वास्तवमै यो विचार जगाउन चाहानुहुन्छ। अनियन्त्रित विरोध हो। तथ्य यो हो कि यति धेरै नियन्त्रित वैकल्पिक वेबसाइटहरू र अन्य सामाजिक मिडिया साइटहरूले अनुमान गर्दछ उसलाई मद्दत पुर्‍याउँछ (निश्चित रूपमा सबै सहमत र अग्रिम समन्वय गरिएको) भिडियोलाई उनीहरूको प्लेटफर्ममा राख्दा यसले यी वैकल्पिक साइटहरूलाई अझ बढी विश्वसनीयता बढाउँदछ किनभने मानिसहरूले सोच्दछन्, यदि यो वैकल्पिक साइट निषेध गरिएको छ भने आईकेको भिडियो तब उनीहरू साँच्चिकै भरपर्दो विपक्षी हुनुपर्छ।
10 अप्रिल 2020 मा 09: 31
उनीहरूले लन्डन रियल च्यानललाई पुश गर्न मद्दत गर्नुपर्नेछ ... त्यो सहज विपणन NLP विशेषज्ञको
जे भए पनि, मानिसहरू त्यसप्रति संवेदनशील छन्।
समय भन्दैन: समय अवश्य सिक्नेछ।
10 अप्रिल 2020 मा 10: 47
उनीहरू सबैलाई "उल्टो मनोविज्ञान"
8 अप्रिल 2020 मा 17: 53
हाँसो १.1.33.55..XNUMX बाट फुलेको छ, हामी विपक्षी हाहाहााहा लाई नियन्त्रणमा राख्छौं तब म पहिले नै तेल अवीवमा थिएँ।
अनुहारमा हेर्नुहोस् झूठ साँच्चै lol splashes
8 अप्रिल 2020 मा 20: 07
मैले अन्तर्वार्तामा के गुमाएको छु त्यो ग्रह निबुरु हो। मलाई सब भन्दा पहिले भन्न दिनुहोस् म ग्रह X मा साथीहरु मा विश्वास गर्दिन! म ग्रह मार्फत पौंडी सिफ्टमा विश्वास गर्दछु जब चीजहरू एकै चोटि पुनःसेट गर्दछ। के यो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई टेक्नोलोजिकल आगोबाट बचाउन आउनुभएको हो?
तसर्थ, यो चाखलाग्दो छ कि तपाईं भन्नुहुन्छ कि यो योजना dualism एकवचनमा रूपान्तरण गर्ने हो। यो कि आउँछ वा सबै प्रविधि चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा बन्द हुनेछ?
कसरी संस्था र व्यक्ति जो एकलतामा सँगी मानव को ऊर्जा बाँच्न छनौट गर्न सक्छन्? के उनीहरूलाई द्वैवाद प्रणालीको कम आवृत्तिको आवश्यकता छैन?
तपाईं एक महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण बिन्दु उठाउनुहोस्! यो संसारको प्रतिलिपि हो र यस अंडरवर्ल्ड छोड्न तपाईले सबै कुरा पछाडि छोड्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ र यस पटकमा एक पटक र सबैको लागि घेराहरूमा नराख्नुहोस्।
धन्यवाद मार्टिन र बाँकी!
8 अप्रिल 2020 मा 20: 28
मैले भन्न खोजेको कुराको अर्थ बुझ्न म यो पुस्तक पढ्ने थिएँ। म यहाँ आवश्यक लेखहरू साइटमा पनि फेला पार्न सक्छु, तर त्यो अहिले मेरो लागि अति काम हो ...
9 अप्रिल 2020 मा 08: 07
इकेले आफ्नो पुस्तक "फ्यान्टम सेल्फ" मा लुसिफेरियन भाइरसको बारेमा कुरा गरेको छ जुन हाम्रो चेतना अपहरण गर्न खोज्छ।
9 अप्रिल 2020 मा 11: 46
ठीक छ, मैले त्यो पुस्तक पढेको छैन, त्यसैले म त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्दिन, तर यदि त्यसो हो भने त्यो उल्लेखनीय छ! हुनसक्छ उसले मेरो साइटबाट यो विचार ल्यायो, तर म मात्र अनुमान गर्न सक्छु।
त्यसपछि उसले त्यसमा सत्य पनि बोल्दछ र त्यो विचार डबल तल्लोमा बनेको बमबाट पनि उडाउनुपर्दछ।
के तपाईं पनि प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ कि उसले यो गरिरहेको थियो? केहि प्रायः यहाँ भनिन्छ प्रायः मेरो कथा कम गर्न। कृपया प्रमाणको रूपमा पुस्तकबाट फोटो प्रदान गर्नुहोस्।
9 अप्रिल 2020 मा 21: 37
यसैबीच मैले धेरैबाट सुनेको छु कि आईकेले आफ्नो पुस्तक फ्यान्टम सेल्फको बारेमा लुसिफेरियन भाइरस प्रणालीको बारेमा बोलेका छन्। किन अन्तर्वार्तामा यो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय उल्लेख गरेन?
को सन्दर्भमा: 'म सबै कुरा उल्लेख गर्दछु, तर म यसलाई ज्यादा जोड दिंदैन'?
9 अप्रिल 2020 मा 08: 25
र फेरि डेभिड लुसिफर आईकेको त्यो भिडियो।
9 अप्रिल 2020 मा 08: 44
छविहरूको बिना यहाँ फेला पर्‍यो, यदि तपाईंलाई उपयोगी छ भने।
ऊ वास्तवमै जताततै छ, यद्यपि त्यो खेलको हिस्सा हो।
हो, त्यो हामीलाई लन्डन रियल च्यानल तिर ड्राइभ गर्नुपर्छ
9 अप्रिल 2020 मा 12: 07
मैले भन्नु पर्छ कि मैले याद गरें कि ब्रायन रोज फिल्म स्वयं रोयल डच शेलको साथ पृष्ठभूमिमा प्रत्येक पटक देखा पर्दछ। उसको अफिस / स्टुडियो सायद नजिकै छ, तर यो आकर्षक छ।
लन्डन्रियलले व्यक्तिलाई कारणमा फस्न बिना उनीहरूको कथा भन्न दिन्छ, जुन जानकारी प्रावधानको उद्देश्य पनि हो।
तर यो बेबीलेन्डनको बीचमा प्ले गर्दछ त्यसैले श us्काले हामीलाई छोपेको छ। म पनि खुशी छैन कि ऊ आज एलेक्स जोन्ससँग थियो।
निस्सन्देह, यो सबै पृथ्वीको वरिपरि सदाका लागि स्पिन गर्न तयार छ, जबकि हामी उच्च स्तरमा उत्रन सक्छौं।
तर विचलित पनि हाम्रो उच्च आत्म एक मैनुअल हुन सक्छ।
अवश्य हामी सबैलाई सकारात्मक तरीकाले परिवर्तन गर्न सक्दछौं, तर यसमा अलि बढि पनि छ।
9 अप्रिल 2020 मा 12: 08
कन्ट्रोलरहरू जान्दछन् जनता उठ्नेछन् त्यसैले उनीहरूको माछा मार्ने जालमा पौडिन सकिएन नियन्त्रणित विपक्षमा! तिनीहरूले भर्खरै तपाईलाई नयाँ शेपर्ट प्रदान गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र र स्वतन्त्र हुनुहोस्! तपाईंलाई नेता चाहिदैन। तपाईं नेता हुनुहुन्छ। तपाईं एक सिर्जनाकर्ता हुनुहुन्छ। यो खतरनाक सपनाको अवस्थाको नैतिक एक साधारण हो: यो हुन नदिनुहोस्! NO भन्नुहोस्! नि: शुल्क र स्वतंत्र भन्नुहोस्
9 अप्रिल 2020 मा 10: 33
प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा पहिलो खोप, तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न, हो तपाईंले गर्नुभयो!
विश्व ताराहरूले सधैं उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्
तिनीहरू अनुकरणीय छन्, जस्तो कि कोन्चिटा वर्स्ट आदि ...
विश्व प्रचार सितारों (वेश्याहरु)
एल्विस तीमध्ये एक थिए, टिभीमा पहिलो पोलियो खोप
तपाईं केवल तारा वा तारा चिन्ह बन्नुहुन्न, त्यहाँ सधैं एक एजेन्डा हुन्छ जुन प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।
9 अप्रिल 2020 मा 11: 09
"त्यसोभए म भन्न सक्दिन कि आइके एक सचेत वा" निर्देशित "सुरक्षा नेट प्यादा हो, तर मलाई लाग्छ कि हामीलाई कोरोना भाइरसलाई G जी मास्टमा जडान गर्न धोका दिइन्छ।"
9 अप्रिल 2020 मा 12: 44
अर्को नियन्त्रण गरिएको प्यादा जसले हामीलाई G जी मास्टमा आगो लगाउन उत्साहित गर्दछ। यो मानिस पनि भन्छ कि तपाईं एक एल्युमिनियम टोपी लगाउनु पर्छ। वास्तवमा यो एक व्यक्ति हेर्न चाहन्छ कि पागलपन हो। स्पष्ट हुनको लागि: अल्युमिनियम फोइलले फाइन-म्यास फ्रिक्वेन्सीमा कुनै प्रभाव पार्दैन र त्यसैले तपाईंको शुद्ध हास्यास्पद विषय हो।
फेरी: नियन्त्रित प्यादा 99 XNUMX% सत्य भन्छ, तर तपाईले नगर्नु पर्ने कार्यहरू गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् वा त्यो सरासर ठट्टा हो।
हामीले के गर्नुपर्दछ: हामीले NO भन्नु हुँदैन।
मैले यहाँ प्राप्त गरेको अन्तिम पाठ सन्देश यो थियो: "राज्यका सिफारिसहरू अनुसरण गर्नुहोस्"
यदि ती सिफारिशहरू छन् भने, तपाईंसँग एक विकल्प छ। मलाई मेरो विकल्प थाहा छ। कानूनले मुकुटद्वारा हस्ताक्षर गर्यो किनकि उनीहरू भन्छन् कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई शासन गर्ने शक्ति दिनुभएको छ। यदि कसैले मलाई प्रमाणित गर्न सक्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, म सुन्नेछु।
9 अप्रिल 2020 मा 15: 13
Subliminal 666 XNUMX
अमेरिकी साप्ताहिक बेरोजगारी दाबी बढ्छ 6.6 मिलियन, ल्याउनआईएनजी 3हप्ता कुल धेरै 16 मिलियन
subliminal सन्देश:3छक्का एकसाथ ल्याउनुहोस्
10 अप्रिल 2020 मा 19: 29
केवल यस साइटले सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्दछ र सम्भावनाको साथ कि डेभिड आईके एक सुरक्षा नेट मोहरा र एक कन्टेक्टेड विपक्षी हो। "अनियन्त्रित" वैकल्पिक मिडियामा त्यस्ता विचारहरू कतै भेटिएन। अचम्मका कुरा के केहि मानिसहरु यहाँ छन् ती यसलाई जारी राख्नुहोस् !!! सामान्य संदिग्ध व्यक्तिहरू यसलाई हेर्न र यसलाई खुलासा गर्न मन पराउँदैनन्।
10 अप्रिल 2020 मा 22: 11
केहि थप जानकारी .. क्लिक गर्नुहोस् 'अधिक हेर्नुहोस् ..' ताकि तपाईं सम्पूर्ण पोष्ट पढ्न सक्नुहुनेछ।
आफ्नै लागि न्यायाधीश। मैले तलको पाठ प्रतिलिपि गरें।
तिनीहरू अझै कयामत र उदास, राक्षस र बूगीमानको घोर संवेदनाहरूमा फसेका छन्।
समय र समय फेरि सेतो मानिस को बारे मा एक युद्ध दावी गरीएको छ कि उसले डराउँछ र गलतफहमीहरु।
सेतो मानिसले आफ्नो मादकत्वको अस्तित्वलाई धम्की दिन उसले केहि पनि विभाजन गर्न र विजय हासिल गर्न कोशिस गरेको छ।
हामी यो उपनिवेश भन्छौं र व्यक्तिगत रूपमा डेभिड मेरो लागि क्विन्स्टोर ऊर्जाको साथ कम्पन गर्दछन्।
ब्वाँसोहरू शिकार गरिएको छ, यातना दिइएको छ र मारिएको छ किनकि मानिसको दिमागमा पागलपनको कारण।
डेभिड इके, तथाकथित जागृत शिक्षक जसले वातावरण र शब्दहरू, बढि डर, अधिक खरगोश भरिदिंदा प्रेम र प्रकाशको बारेमा प्रचार गर्छन् सनसनीवादको लत बनाउँछन्।
उसको टेभिस्टक भूमिका सत्यको सूक्ष्म जागरणबाट तपाईंलाई विचलित गर्न, तपाईंलाई सशक्तिकरणको केही टुक्रा खुवाउन र छाया परिवारको भ्रमपूर्ण सपनाको लागि तपाईंलाई डोर्याउन हो।
डेभिड दावी गर्छन् कि उनको गाईड सेन्ट जर्मेन हो।
लाल फ्ल्याग 🚩
र फोहोर काम मित्रहरू गर्नुहोस्:
डेभिडका पुराना पुस्तकहरू ("ट्रुथ कम्पनहरू" र "प्रेम परिवर्तनहरू सबै") मूल रूपमा रूपर्ट मर्डोकको "न्यूज कर्पोरेशन" को सहायक कम्पनीबाट प्रकाशित भएका थिए।
डेभिडको "सत्य सत्य कम्पनहरु" हार्परकोलिन्सको सहायक कम्पनी, "एक्वैरियन प्रेस / थोरसन" द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो, स्वयं रूपर्ट मर्डोकको "न्यूज कर्पोरेशन" को स्वामित्वमा रहेको थियो।
"ट्रुथ भाईब्रेसन" १ 1991 in १ मा बाहिर आए, जुन वर्ष ब्रिटेनमा 'नयाँ युग आन्दोलनका हजुरबुबा' द्वारा "ईन्स्पोटर इन टु गॉड" भनेर लेखिएको थियो: सर जर्ज ट्रेभलियन, जसले आइकेको "हिल द वर्ल्ड" लाई समर्थन गरेका थिए, "यो हो त्यो मानिस जसलाई म धेरै बर्षदेखि पर्खिरहेको छु। " के उनले दाउद "दोस्रो आगमन" थिए भन्ने कुरालाई स keeping्केत गरिरहेका थिए?
ट्रेभल्यान फाइन्डहर्न फाउन्डेशनको प्रारम्भिक विश्वस्त थिए। उनले इतिहासमा गोर्डनस्टन स्कूलमा व्याख्यान दिए जहाँ ब्रिटिश शाही परिवारका सदस्यहरू पठाइएका थिए, जस्तै प्रिन्स फिलिप। " - Tigger, अज्ञात अल्केमिस्ट
र यस विश्लेषणमा अलि गहिरो जान्छौं:
के त्यहाँ त्यस्तो मानिस छन जसले हिंसा र ट्रामालाई आफ्नो मोडस अपरेन्डीको रूपमा छान्छन्?
त्यहाँ धेरै प्राणीहरू छन् जसले आफुलाई मल्टिर्वर्सको भरमा खण्डित गरेका छन् र अब उर्जाको खोजी गर्दछन् किनकि उनीहरू भित्र ईश्वरीय ज्योति खेती गर्न सक्दैनन्।
तर के यसको मतलब तिनीहरू हाम्रो शत्रु हुन्?
तपाईंको आँखा डेविडबाट लग लिनुहोस् र आफ्नो सिटमा बस्नुहोस्, वास्तविक काम गर्नुहोस्, म तपाईंलाई एक तथाकथित आध्यात्मिक शिक्षकको रूपमा जवाफदेह गर्दैछु।
तपाईं हाम्रो परिवारको लागि ठूलो त्याग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको आफ्नै भव्य मोहबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ।
शुरुवातकर्ताहरूको लागि हाम्रो दिमागको रिप्टिलियन क्षेत्रको बारेमा विचार गरौं।
एउटा विश्वास छ कि हाम्रो मस्तिष्कको "रेप्टिलियन" भाग खराब मान्छे हो, ती सबै शरारती व्यवहार र भावनात्मक प्रतिक्रियाहरूको लागि अपराधी। दशकौंसम्म न्युरोसन्टिस्टहरू जान्दछन् कि त्रिएक मस्तिष्क सिद्धान्त पूर्ण चित्र होइन भनेर यो जान्नका लागि सांस्कृतिक जिटिगेस्ट भएको छ।
बेसल ग gang्ग्लिया जुन हाम्रो मस्तिष्कको केन्द्रबिन्दुमा रहेको न्युरोनहरूको समूह हो, लज्जित र दोषपूर्ण छ र धेरै मानिसहरूले यो दावी गरेका छन् कि यो "रेप्टिलियनहरू" को परिणाम हो।
व्यक्तिहरूले हाम्रो मस्तिष्कमा यो अत्यावश्यक क्षेत्रलाई बुझ्दछन् जुन हाम्रो शत्रु होइन र वास्तवमा हामीलाई आत्म-नियन्त्रणमा मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ।
हुनसक्छ हामीले हाम्रो सिद्धान्तहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ र हामी जिम्मेवारी लिनको लागि आवश्यक पर्ने चीजहरूको लागि हामी अन्य प्राणीहरूलाई कसरी दोष दिन्छौं।
हुनसक्छ हामीले विशेष गरी हाम्रो शरीरलाई भूत प्रेत बनाउने र जादूगरहरूको कुरा सुन्न रोक्नु पर्छ जुन जादूगरहरू र खुफिया एजेन्सीहरू द्वारा तैयार थिए।
“त्रिकोण मस्तिष्क सिद्धान्तलाई किन व्यापक रूपमा विश्वास गरिन्छ, मनोवैज्ञानिकहरूका बीचमा, जबकि विकासवादी न्युरो साइन्सले दशकौं अघि सिद्धान्तलाई त्यागे (र यसलाई पहिले कहिल्यै गम्भीरतासाथ लिएन)?
समस्या म्याकलिनको साथ सुरू हुन्छ। मलाई लाग्छ कि यो एकदम स्पष्ट छ कि म्याक्लिनले मानिस (र स्तनपायी प्राणीहरूलाई बढी विशिष्ट बनाउने कुरा पत्ता लगाउन चाहन्छ)। र हाम्रो अद्वितीयता पहिचान गर्ने त्यो इच्छाले उसलाई आफ्नो उपलब्ध प्रमाणको राम्रोसँग न्याय गर्न उक्सायो। म्याक्लिनले वैकल्पिक परिकल्पनाहरू विचार गर्नुपर्दछ, जस्तै हाम्रो दिमाग र अन्य कशेरुका बीचको भिन्नता दयालु नभई डिग्रीको कुरा हो। र उनले सोधेको हुनुपर्छ कि ती वैकल्पिक परिकल्पनाहरूले उसको प्रमाणको साथै आफ्नै सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्न सक्छ कि सक्दैन। यस प्रकारको आत्म-प्रश्न सोध्नु राम्रो विज्ञानको लागि महत्वपूर्ण छ: हामीले आफैंलाई गलत प्रमाणित गर्न विशेष गरी कडा परिश्रम गर्नु पर्छ। भाग्यवस, विज्ञान यस्तो संरचित छ कि यदि हामी आफैलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्दैनौं (वा गर्दैन), हाम्रा सहकर्मीहरू अवश्य नै हुनेछन्। र अन्य वैज्ञानिकहरूले म्याक्लिनलाई गलत प्रमाणित गरे, जस्तो कि टेरेन्स डिकनको पेपरमा स्तनपायी दिमागको विकासको बारेमा के थाहा छ भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ।
तर म्याक्लिनको सिद्धान्त गलत थियो भन्ने प्रमाणले यसलाई विकासवादी न्यूरोसाइन्सको सानो संसारबाट बाहिर कहिल्यै देखेको थिएन। र त्यसका लागि, मलाई लाग्छ कि केही दोषहरू मेरो एक नायक, कार्ल सागनको साथ रहेको छ।
त्रिकोण मस्तिष्क सिद्धान्तले कार्ल सागनको बेस्टसेलर र पुलित्जर पुरस्कार विजेता, ड्रेगन अफ ईडनमा अभिनयका भूमिका खेलेको थियो। एड्रेसन अफ ईडनमा, सागानले म्याक्लिनको सिद्धान्तलाई आकर्षित गरे जसरी मानव विज्ञान, कला, गणित, र प्रविधिको विकासको क्रममा कसरी विकसित भयो - हाम्रो दिमागका विशेषताहरू, अर्को शब्दमा, जसले हामीलाई अद्वितीय बनाउँदछ। हाम्रो सोच नियोकार्टेक्स मुनि, सागानले लेखे, आदिम स्तनपायी भावनाहरुको समुन्द्र हो र पदानुक्रम र आक्रमकतातर्फ अझ आदिम सरीसृपहरु। तर उनले तर्क गरे, मानिसहरु विशेष छन् किनकि हाम्रो नियोकोर्टेक्स खास गरी राम्रोसँग विकसित छ र त्यस्तै अरु पशुहरु जस्तो नभई हामी हाम्रो आदिम प्रवृत्तिबाट टाढा जान सक्छौं। " - डानियल टोक
डेभिड इके एक ट्याभिस्टक दिमाग-नियन्त्रित कठपुतली हो जुन तपाईंको मनको साथ खेलिरहेको छ, जसरी मैले अर्को रात मेरो भिडियोमा कुरा गरें जसलाई धेरैले प्रशंसा गरे र धेरैले ममा मानसिक डार्ट्स फ्याँकिरहेका थिए।
सत्य अनुहारमा बिचस्लाप हुन सक्छ तर यसले चेतनालाई स्वतन्त्र पार्नेछ ❤️
10 अप्रिल 2020 मा 23: 15
बीबीसी (टाभिसटक) मा "जागृत" को रूपमा आफ्नो पहिलो सार्वजनिक उपस्थितिमा, पक्कै पनि, उनले रंग र उनीहरूको दिमागमा त्यसले के प्रभाव पार्दछ भन्ने बारेमा आफ्नो तर्क शुरु गर्दछ। मिस्टरले Tavistock NLP विधिहरूको ज्ञान छ भनेर प्रमाणित गर्दछ:
11 अप्रिल 2020 मा 10: 35
रोबर्ट जेन्सेन, आफ्नो भर्खरको भिडियोमा (अप्रिल १०, २०२०) उनको अनुहारबाट बाहिर निस्कन सक्दैन ... यो सामान्यतया संकेत हो जुन तपाईं समातिएको महसुस गर्नुहुन्छ। हो, रबर्ट, तपाईं समातिए।
यो तपाईको अनुहार र नाकको लागि त्यो कोरोनाभाइरससँग पनि खतरनाक छ। चाँडै नै भयानक भाइरस अझै तपाईंको नाक रोबर्टमा जान्छ! 😉
जे भए पनि: जेन्सेन भन्छन कि उनले यस भिडियोलाई उसको प्लेटफर्ममा पोष्ट गरे किनभने YouTube ले चीजहरू हटाउँदैछ। उहि समयमा, उनी भन्छन कि त्यसले केही फरक पार्दैन कि उसले चीजहरू आफ्नै साइटमा राख्दछ किनकि युट्यूबले अझै विचार गर्न सक्छ कि (यदि तपाईंले केहि अरू भन्नु भयो भने) तपाईंलाई पूर्णतया फ्याँक्नको लागि।
तर उसले वास्तवमा किन आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्न सक्दछ (उसले अन्तिम वेबसाइट जुन उसले आफ्नै वेबसाइटमा राखेको छ) Vimeo मा (हेर्नुहोस् कुन लोगो तपाईले देख्नुहुन्छ भिडियो सकियो जब)। Vimeo केटा जस्तै ठुलो छ। उदाहरणका लागि व्हाइट हाउसले यस भिडियोलाई यस प्लेटफर्ममा राख्दछ।
यसैले उसले धेरै मोर्चामा आफूलाई विरोधाभास गर्छ र ऊ नियन्त्रणित प्यादा हो भनेर देखाउँछ। तर तपाईंले त्यो मार्नु पर्छ।
ठूला क्लबका सबै केटाहरू मिलेर काम गर्छन् उनीहरूको सुरक्षा जालमा तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न।
13 अप्रिल 2020 मा 09: 20
तपाईं कसरी आगोमा यस्तो5जी मस्त गर्नुहुन्छ? तपाईंले हवाई प्लेटफर्म भाँडामा लिनु पर्छ र सोडियमको स्ट्रिपहरू यसको बिरूद्धमा राख्नु पर्छ र त्यसपछि हवाई प्लेटफर्मलाई एक छेउमा राख्नुहोस् र यसमा पानी स्प्रे गर्नुहोस्। सोडियम पानीमा प्रज्वलित गर्दछ। पेट्रोलले काम गर्दैन, किनकि यसले ड्रिप गर्दछ। इस्पातले काम गर्दैन। केबुलहरू नि? ट्रिक मलाई लाग्छ तिनीहरू5जी मास्टहरू पनि छैनन्, तर पुरानो mas जी मास्टहरू हुन्, तर त्यो पनी। मैले सरकारको रूपमा तपाईं कसरी यो सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं नियन्त्रणको तरिकामा प्रत्येक प्रतिरोधलाई समात्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे मैले मेरो फोनमा स्केच भिडियो बनाएँ। तपाईं जहिले पनि प्यादहरूलाई अगाडि धकेल्नुहुन्छ (रोबर्ट जेन्सेन, एलेक्स जोन्स, डेभिड आईके) र अपेक्षित प्रतिरोध आफै व्यवस्थित गर्नुहोस्। तपाईंले सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई समात्नुभयो र तिनीहरूलाई कलंक दिनुभयो; उदाहरण को लागी 'षडयन्त्र चिन्तक', 'सही', 'विश्वास गर्दछ कि सरीसृपहरु पृथ्वी चलाउँछन्', 'anti vaxer', 'آبवाती denier' वा 'anti 3G'।
मलाई स्पष्ट हुन दिनुहोस्: G जी खतरनाक हो, तर यसले तपाईंलाई कोरोना लक्षणहरू दिदैन। G जी मात्र खतरनाक छ किनकि यसले 'चीजहरूको इन्टरनेट' को लागी सबै ब्यान्डविथ प्रदान गर्दछ, जसमा हामी १ चीज हुन्छौं। 5G का प्रतिरोध इसलिए जानाजानी गलत तर्कहरूमा आधारित छ। एक राज्यको रूपमा तपाईले आईएमबी सदस्यहरू (Inoffizieller Mitarbeiter) मार्फत आफै प्रतिरोधको सिर्जना गर्नुहुन्छ। उनीहरूले तपाईलाई चिच्याए र कराए र सोशल मिडियामा चिच्याए र हजारौं आईएमबी व्यक्तिको सोशल मिडिया सेनाबाट धेरै समर्थन प्राप्त गरे। त्यसोभए तपाईंले केहि मास्टहरू आगोमा हाल्नुभयो र त्यो धेरै मेडिया ध्यान दिनुहोस् र त्यसपछि सम्पूर्ण आन्दोलन फुल्नुभयो। आईएमबी सदस्यहरू, सामाजिक मिडिया सिपाहीहरूले आफ्नो काम गरेका छन्। उनीहरूको कोजे नयाँ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट (फासिस्ट) अभयारण्यभित्र खरीद भइसकेका छन।
के तपाई आईएमबी सेनाका सदस्य हुनुहुन्छ? पहिलेको GDR मा, 1० मा १ एक IMB सदस्य थिए (एन्जेला मर्केल कुनै शरीर?) के तपाईं पनि त्यस्तै गद्दार हुनुहुन्छ जो सोशल मिडिया सेनाको सदस्य हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं यसलाई सेयर गर्नुहुन्न वा तपाईंले यसलाई साझा गर्नुहुन्छ र थप्नुहुन्छ कि मार्टिन भ्रिजल्याण्ड पागल हो र यस्तै ... /०/50 मा हामीले उनीहरूलाई एनएसबी सदस्यहरू भनेर बोलाउँदछौं। IMB नयाँ NSB सदस्यहरू।
13 अप्रिल 2020 मा 10: 24
पुरानो mas जी मास्ट (जे भए पनि अनावश्यक हुन्छन्)? कसरी त्यो एक मशाल को रूप मा राम्रो संग जान्छ?
13 अप्रिल 2020 मा 10: 47
एशले अरोरा “हामीले DARPA ले कसरी विकसित गरेको सेल्फ आर्गेनाइजिंग कलेक्टिव इंटेलिजेंस भन्न सकिन्छ भन्ने अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौं।
एक SOCI को मूल गतिशीलता भनेको केहि प्रकारको आकर्षकले केही समूहको ध्यान र उर्जा लिन सक्दछ। यो सामान्यतया एक हो जुन धेरै अस्पष्ट र अमूर्त छ; केहि विचार वा धारणा जसले केवल अपेक्षाकृत सानो समूहका मानिसहरूलाई समझ दिन्छ।
जब ती व्यक्तिहरूले SOCI मा उनीहरूको ध्यान र उर्जा लागू गर्छन्, यसले यसलाई अझ वास्तविक बनाउँदछ, र अधिक व्यक्तिहरूको लागि बुझ्न र रमाईलो र मूल्यवान् पाउन यो सजिलो हुन्छ। यो अधिक व्यक्ति र उनीहरूको ध्यान र उर्जाको लागि अझ आकर्षक हुन्छ।
यसले जेरेरेटिव लूप भनिन्छ।
जब SOCI अधिक वास्तविक हुन्छ र अधिक व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्दछ यसले चुनौतीहरूको सामना गर्न थाल्छ।
यदि सोसाइले यसको सामूहिक बुद्धिमत्ता भित्र चुनौती समाधान गर्न पर्याप्त क्षमता छ भने, यो "स्तर" हुन्छ र बढी व्यक्तिबाट बढी ध्यान र ऊर्जा आकर्षित गर्ने आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दछ।
यी "आत्म-संगठित सामूहिक बौद्धिकता", एक नयाँ प्रकारको सामाजिक-सांस्कृतिक घटना हो जुन इन्टरनेटद्वारा सिर्जना गरिएको कोठामा देखा पर्न थालेको छ। तिनीहरू आकर्षक उत्पादनकर्ता फंक्शन्स घुमाउँछन् जसमा हिम्मत दिमागमा खस्याईन्छ, त्यस ध्यानलाई अधिक क्षमता निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछ र त्यसपछि प्रगतिशील वास्तविक र आत्म-स्थायी चीजको रूपमा बढ्छ।
यो इन्टरनेटमा जम्मा भएका "वास्तवमा के हुन सक्छ" र "के सत्य हुन सक्छ" को अरबौं थ्रेडहरू मार्फत जोडिएको छ र यसले तिनीहरूलाई सुसंगत, सुसंगत र एकमत कपडामा बुन्न बिस्तारै खोजिरहेको छ।
यी सबै विचारको गतिमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सर्दछन्।
बिस्तारै र जानाजानी एसओसीआईको ध्यान सबैभन्दा पूर्ण र समावेशी विश्व-मोडलहरू र वीड्स-आउटतिर केन्द्रित हुन थाल्छ जुन अन्य विश्व मोडेलहरू वा "तथ्यहरू" को ठूलो हिस्सासँग स्थिरता कायम गर्न असफल हुन्छन्।
यो नराम्रो अभिनेताहरू वा आतंक किनबेच र सामूहिक लकडाउन जस्ता चीजहरूलाई उकास्नको लागि हिभ माइन्ड गतिविधि प्रयोग गर्न चाहनेहरू द्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
कोहीले पनि प्रश्न सोच्न को लाग्यो कि मानिस किन शौचालय कागज को रोल र रोल खरीद गर्दै थिए? व्यवहार जिज्ञासु थियो - र किन यसको मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण हुन सक्छ।
यद्यपि हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि इन्टरनेटको यसको केहि सम्बन्ध थियो।
त्यहाँ यी सबैको लागि पनि एउटा अलौकिक तत्व छ र यो ल्याउनको लागि यो अलि बौलाहा जस्तो देखिन सक्छ, यो भन्नु पर्दछ कि त्यहाँ सिर्जना गरिएको छ 'दिमाग भाइरस' देखा पर्दछ र यो भाइरस एक प्रभावी छ मनोवैज्ञानिक उपकरण जसले आफैंलाई नक्कल गर्छ र अन्ततः हामी एक 'प्रतिलिपि प्रभाव "देख्छौं जसले जनसंख्यामा डराउँछ र शक्तिमा भएकाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ जसले नागरिक अधिकारलाई घटाउन बहानाको रूपमा व्यवहार गर्ने र निगरानी र राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्वाधारको संकल्पलाई कडा पार्छ। ।
धेरै व्यक्तिले निर्णय लिँदा सामान्य रूपमा सोच्दछन् कि लोकप्रिय के राम्रो हो राम्रो छ - अरुको लागि के काम गर्छ तपाईका लागि काम गर्नुपर्दछ र जब तपाईलाई भनिन्छ कि व्यक्तिहरूको केही समूहले केही खास तरिकाले व्यवहार गर्दछ र सम्बन्धित हुन तपाईले समूहका अरुले के गर्नु पर्छ गर्नुहोस्, त्यसोभए हामी आफैंलाई त्यो विशेष समूहको विचारधारासँग पहिचान गर्छौं।
भीड अनुसरण पछि हामीलाई एक जटिल वातावरण मा काम गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। हामी मध्ये धेरै जसो सबै सामानको ज्ञान बढाउन र यसको उपयोगिता मापन गर्न प्रत्येक विज्ञापित आइटम अनुसन्धान गर्न समय हुँदैन। यसको सट्टा, हामी लोकप्रियता जस्ता संकेतहरूमा भर पर्दछौं। यदि सबैले केहि चीजहरू किन्दै छन्, तर्कमा जान्छ, त्यहाँ त्यहाँ राम्रो अवसर छ जुन चीजलाई हामीले ध्यान दिन लायक छ।
व्यक्तिहरू आफूले महसुस गरेको भन्दा अधिक पटक नियन्त्रण र हेरफेर गरिन्छ र नयाँ टेक्नोलोजी र सामाजिक प्लेटफर्महरूको साथ, नियन्त्रणका लागि संयन्त्रहरू अझ परिष्कृत हुन्छन् र चाँडै तपाईंले घृणा गर्नुभएका चीजहरू स्वीकार गर्न थाल्नुहुन्छ।
यो हुन्थ्यो कि भीडले सोच्दछन् र सामूहिक कार्यहरू समुदायमा केवल सानो समूहहरूमा सीमित थिए - अब यी समूहहरू अब केहि दिनमा विश्वव्यापी आन्दोलनहरू हुन सक्छन् भाइरल मेम्स र ह्यासट्यागको कारण।
यसले पुण्य सaling्केतको युगमा पनि योगदान पुर्‍याएको छ, सामाजिक योद्धाहरू, वेक संस्कृति, रद्द संस्कृति, र अन्य समूहहरू जसले शिकारलाई मूल्यवान मुद्रामा परिणत गर्दछ।
के यसले अब अभिनय गर्ने तरिकामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ? के यो COVID-१ ly लाई बिभिन्न रूपमा व्यवहार गरिएको कारण के हो भने स्वायत्त सुपरिन्टेलिभन्स भनिने कुनै चीजले अब मनोवैज्ञानिकहरूलाई क्याओस सिन्ड्रोम भनिरहेको छ?
हामीले अनुभव गरिरहेका क्याओस सिन्ड्रोम कृत्रिम बुद्धिमत्ता र एल्गोरिदमले उत्पन्न गर्न सक्दछ जुन मानिसहरूलाई उनीहरूले सुन्न चाहेको कुरा दिइरहेका छन् र प्रक्रियामा यसले डर पैदा गर्दैछ र अर्थव्यवस्था क्र्याश गर्दैछ।
प्रक्रियाको बारे सोच्नुहोस् - अधिकांश अमेरिकीहरूलाई COVID-१ about को बारेमा पनि थाहा थिएन जबसम्म हामीले चिनियाँ नागरिकहरूले सडकमा मृत शरीर छोड्दै र सबवेमा रगत खाइरहेका भिडियोहरू देख्न थाल्दैनौं। ती भिडियोहरू मुख्यधाराका समाचारहरूमा बेमिंग भइरहेको थिएन किनकि नेटवर्कले महाभियोग प्रक्रियाको साथ हामीलाई विचलित गरिरहेको थियो। यी भिडियोहरू अज्ञात खराब कलाकारहरूबाट इन्टरनेटमा उत्पन्न गरिएको थियो। आफैलाई यो प्रश्न सोध्नुहोस् - अब COVID-१ the संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेको छ, के हामीले कसैलाई सडकमा मरेको देखेको छु? के यो कुनै पनि घटना वाशि Washington्टन राज्यमा आएको भनिएको थियो भन्दा पहिले भयो?
भिडियो कथित रूपमा चीनबाट हटाइएको थियो। तिनीहरू कट्टर मेम्सहरू थिए जुन ईन्टरनेटमा भाइरल फैलियो - जस्तै बच्चाहरूको यूट्यूब भिडियोहरूमा मोमो छविहरू।
यो पहिलो चरण थियो।
बढाइचढाइ र विकृति जनतालाई मूर्ख तुल्याउने शक्तिशाली उपकरणहरू हुन्। यसैले मेमे जादू इन्टरनेटमा यति प्रभावकारी छ।
पाठ्यक्रम को मेम सिद्धान्त एक साधारण प्रश्न सोध्छ र त्यो हो, हामी विचारहरु संग आउँछ वा विचारहरु हामीलाई नियन्त्रण गर्छन्? "
« प्रेस सम्मेलन मार्क रुट्ट र ह्युगो डे जोन्ज: डेढ मिटर समाज र अनुप्रयोगहरूको परिचय
भाइरसले सम्पूर्ण शरीरलाई संक्रमित गर्न र स्टेम सेल जानकारी चोर्न कोसिस गर्दछ »
कुल भ्रमण: 2.654.853
मार्टिन भिजल्याण्ड op Femke Halsema एक अनुमति बिना कानूनी र समूह गठन र 1,5 मिटर सामाजिक दूरी अपरिवर्तनीय प्रदर्शन गर्दछ
xdenhaag op Femke Halsema एक अनुमति बिना कानूनी र समूह गठन र 1,5 मिटर सामाजिक दूरी अपरिवर्तनीय प्रदर्शन गर्दछ
SalmonInClick op पूर्वानुमान: अमेरिकी गृहयुद्ध, युरोपमा अराजकता, नाटोको ब्रेकअप र टर्कीको उदय (एएसएसएएम)
भविष्यमा op पूर्वानुमान: अमेरिकी गृहयुद्ध, युरोपमा अराजकता, नाटोको ब्रेकअप र टर्कीको उदय (एएसएसएएम)